Ụlọ ndị Rom na Spain | Njem akụkọ
Mariela Carril | 19/05/2022 17:00 | España, Ihe ị ga-ahụ
Ọ na-adị m mgbe niile na mgbe mmadụ chọrọ iche n'echiche ndụ nke afọ gara aga, ụlọ ndị eze anaghị enye ezigbo akwụkwọ ozi. Oke oke oke oke, buru oke ibu, enweghị onye. Otú ọ dị, ụlọ, ọbụna ndị kasị mfọn òtù nke ọha mmadụ, m kwere na ha na-anapụta a truer na nso image nke kwa ụbọchị ndụ afọ, ọtụtụ narị afọ, gara aga.
En España e nwere ọtụtụ ihe atụ site n’oge Alaeze Ukwu Rom weghaara ala dị larịị. Villalọ ndị aristocratic nke ime obodo bụ akụ ihe mgbe ochie na ndị njem nlegharị anya. Ma taa, anyị ga-ezute ụfọdụ n'ime Villalọ ndị Rome kacha mma na Spain.
villa roman a dị na Valladolid, na Ogbe kwụụrụ onwe nke Castilla y León. Ụbọchị sitere na narị afọ nke anọ na a na-echekwa ihe ndị mgbe ochie site na ụlọ. Enwere njem nlegharị anya nke na-enye gị ohere ịhụ mkpọmkpọ ebe dị nso na enwerekwa ntụrụndụ nke a ogige ime obodo (Ụlọ obodo Rom site n'otu oge ahụ), nha ndụ, na ngwá ụlọ na ihe niile.
Ndị ọkà mmụta ihe ochie enwewo ike ịchọpụta nke ahụ N'okpuru owuwu nke narị afọ nke anọ, e nwere nke ọzọ meworo agadi, site na narị afọ nke atọ, ọzọ mfe. Ọ bụ ezie na a maghị aha ndị nwe nke mbụ ma ọ bụ nke abụọ, o doro anya na nhazi nke ọzọ dị mma karị. A na-ahụ ya na àgwà nke mosaics, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ na nha, nke karịrị mita 2500, nke nwere ogige abụọ nwere ogidi, ebe ezinụlọ na ebe ndị ọbịa, ebe ịsa ahụ na ebe ndị ohu.
E nwere ngụkọta nke square mita 400 kpuchie mosaics echekwara nke ọma, na geometric, floral na azụ gburugburu. Nke kachasị mma bụ nke a maara dị ka Pegasus. E nwekwara setịpụ mmiri na-ekpo ọkụ nke nwere ọdọ mmiri na-ekpo ọkụ na oyi na n'ezie, ụlọ mposi.
Ọnọdụ: Ụzọ N-601. Valladolid - Adanero, km 137. Almanera de Adaja-Puras. Valladolid.
Nhazi: n'oge oyi, ọ na-emeghe Thursday na Sunday na ezumike, site na 10:30 ruo 14 na site na 16 ruo 18. N'oge okpomọkụ, Tuesday ruo Sunday n'otu oge ahụ n'ụtụtụ na site na 16:30 ruo 20 n'ehihie. Emechiri na Disemba 24, 25 na 31 na ọnwa Jenụwarị dum.
Entrada: Euro 3.
Nleta a bụ n'efu mana enwere akụkụ ozi. A na-enye njegharị eduzi na n'efu mana ọ bụ naanị maka otu na ahaziri na mbụ. Enwere ntuziaka ọdịyo.
Obodo a mebiri emebi bụ na Huesca, kilomita ole na ole site n’obodo Fraga, nke dị n’akụkụ Osimiri Cinca. na Aragon. Romanization nke mpaghara a nke obodo malitere na narị afọ nke abụọ na obodo a bụ ihe atụ.
Ndị ọkà mmụta ihe ochie kweere na ndị nwe ya na-arụ ọrụ ugbo na ịkọ ọka, na-ebupụ mmepụta site n'osimiri gaa Ebro kwupụta Celsa ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ mmiri Dertosa ma si ebe ahụ gaa Rom, isi obodo nke Alaeze Ukwu ahụ. Ha kwenyekwara na malite na narị afọ nke abụọ AD na nke ahụ mechara gbasaa ntakịrị. N'ime ya bụ ntọala kọlụm, ndị akwarium nke ogige etiti ya na frescoes mmiri ya, olulu mmiri na nhazi nke ndị ọzọ.
Anyị n'okpuru mosaics echekwara nke sitere na narị afọ nke anọ AD O nwere nke nyere obodo ahụ aha, FORT-NATVS, nke bụ akụkụ nke ókèala a chọtara n'otu ọnụ ụlọ dị n'ime obodo ahụ. Ihe ederede pụtara ewepụtala mkparịta ụka, ụfọdụ na-ekwu na ọ metụtara onye nwe obodo ahụ bụ Fortunato, ndị ọzọ nwere òtù nzuzo nke Cibeles.
Mgbe a gbahapụrụ villa ahụ na narị afọ nke isii, ọ ghọrọ basilica Paleo-Christian ma ị nwekwara ike ịhụ nke ahụ: atụmatụ ala ya nwere oghere atọ, apse, ebe a na-eme baptizim nke nwere akara baptizim.
Ọnọdụ: Ụzọ A-1234 si Fraga ruo Zajdín, km 4. Fraga, Huesca.
Ọnụego: n'efu. A na-ahazi njegharị eduzi ma ọ dịkarịa ala ụbọchị iri tupu oge eruo ma bụrụ maka otu nke opekata mpe mmadụ iri.
Ọ bụ saịtị ihe ochie kpuchiri ekpuchi nke nwere okporo ụzọ ime. Enwere ihe nlere nha 1:1, ogwe na ihe nnomi.
Bụ Na Cordoba, n'ime eke ebe a maara dị ka Los Arenales. Mkpọmkpọ ebe ahụ laghachiri ma ọ dịkarịa ala Narị afọ XNUMX AD, bụ́ mgbe ndị Rom ji ohere nke iyi na-asọ asọ nke taworo ruo taa. Ha wuru ụlọ ntụrụndụ n'akụkụ abụọ nke ụzọ mmiri ahụ: n'akụkụ aka nri ndị nwere mmiri oyi na n'aka ekpe ndị nwere mmiri ọkụ.
Ndị ọkà mmụta ihe ochie echewo na a okirikiri nhọrọ ukwuu na ọwa mmiri na ọdọ mmiri na mmiri reservoirs. Achọtala ala mosaics nwere ọtụtụ agba nke ọdịdị geometric, mgbidi stucco nwekwara agba, ọdọ mmiri nwere akụkụ anọ na ndị ọzọ. Ụlọ ndị a niile sitere n'ihe ndị ọkà mmụta ihe ochie na-akpọ Phase I. N'ọgbọ nke Abụọ, e wuru obodo ahụ n'onwe ya, nke nwere ebe dị square mita 4 ma ọ bụ karịa.
N'ọkwa nke Abụọ nhapụ na ọrụ ndị Alakụba na-ewere ọnọdụ, na agba nke IV na-eche na agbahapụ kpamkpam. Akụ nke Villa a bụ mosaics ya.
Ọnọdụ: Genia Bridge, Cordoba. Ụzọ CO - 6224, km 2,70.
Nhazi: n'oge oyi, site na Septemba ruo June, ọ na-emepe site na Mọnde ruo Fraịde site na elekere 9 nke ụtụtụ ruo elekere abụọ na ngwụsị izu site na elekere 14 nke ụtụtụ ruo elekere 10. 14 p.m. Emechiri ekeresimesi, Jenụwarị 9 na 14.
Ọnụego: bụ 3 €. Njem nlegharị anya a na-akwụ ụgwọ euro 5 ma enwerekwa nleta dị egwu na nkwekọrịta mbụ. Enwere ntuziaka ọdịyo efu na njegharị 5D nwere enyo VR, dabere na ịdị adị.
A na-echekwa mkpọmkpọ ebe ahụ site na ihe owuwu mepere emepe enwere ụzọ ije.
Ndị Rom na-arụ ebe a amụbaala nke ukwuu. Obodo Villa Ọ bụ ya na-ahụ maka ọrụ ịkụ mmanya na mkpụrụ oliv na ọ bụ nnukwu nkọwa nke ihe e mere n’oge ahụ n’etiti ndagwurugwu Ebro, ihe kacha adọrọ mmasị bụ. paris rustic n'ebe a na-esi nri / pịa mkpụrụ vaịn na oliv. Enwere ngwaọrụ ịpị na ntọala sitere na igwe igwe ochie.
Villalọ ahụ dị na promontory 600 mita n'ịdị elu n'ihe metụtara gburugburu ya, n'akụkụ aka nri nke ịda mbà n'obi Ebro. Ngwuputa ihe ochie ewepụtala ìhè ọtụtụ akụ, peristyle nke ụlọ ahụ ejiri akwa akwa na mgbidi stucco na-ese, dịka ọmụmaatụ.
Ọnọdụ: Ụzọ mmiri mmiri si Urrea de Gaén. Teruel.
Oge: n'oge okpomọkụ ọ na-emeghe na ngwụsị izu na 17,30:10 pm na site Wednesday na Sunday site na 13 am ruo 16 pm na site 19 pm ruo XNUMX pm N'oge oyi naanị site oge atọrọ.
Udu: njegharị eduzi izugbe na-efu euro 2. Ọnụ ụzọ 5 euro.
N'ime obodo a ka ha chọtara kacha mma conservative wineries na Europe. Villa ahụ sitere na gburugburu Narị afọ XNUMX AD na mpaghara eke nke dị mma maka ịkụ osisi oliv, ọka na vine.
Villalọ Rome ma ọ bụ ụlọ obodo ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita asaa n'ebe ndịda Arellano, na nso obodo Estella. Aha ya na-enweta site na ọmarịcha mosaic a na-akpọ muses, taa na nkọwa zuru ezu mmeputakwa na National Archaeological Museum.
Ewubere obodo a n’agbata narị afọ nke mbụ na nke ise AD ma hụkwa ụlọ dị iche iche a raara nye maka imepụta mmanya. A na-echekwa mkpọmkpọ ebe ahụ site na ihe owuwu nke ihe karịrị puku square mita abụọ na ogwe ozi jupụtara na ebe dị iche iche n'akụkụ ụzọ ahụ. Nke a dị n'akụkụ okporo ụzọ ígwè.
Ị ga-ahụ ọnụ ụlọ ebe mmanya mere agadi; ndi ozo ya na ihe mmepụta ya, ya bụ 700 lita ite na a tank miri emi mita atọ nke chịkọtara mmiri ozuzo. E nwekwara mosaics, n'ụzọ doro anya, ndị ọzọ karịa nke muses: otu bụ n'ime ime ụlọ na onye ọzọ na isi ụlọ na 90 square mita.
Ọnọdụ: Ctra. NA – 6340 Arróniz/ Allo. Km 20. Arellano. Navarre.
Oge: n'oge oyi ọ na-emeghe na Friday na Saturday site na 10 ruo 14 na site na 15 ruo 18 na na Sunday site na 10 ruo 14. N'oge opupu ihe ubi na Friday na Saturday site na 10 ruo 14 na site na 165 ruo 19, na Sunday site na 10 ruo 14. okpomọkụ ọ na-emeghe na Friday na Saturday site na 10 ruo 14 na site na 16 ruo 20, na na Sunday site na 10 ruo 14. N'August, ọ na-emeghe nanị site na Wednesday ruo Sunday.
Ọnụego: ndị okenye na-akwụ 2 euro.
Enwere diorama, ntuziaka, broshuọ na njem nlegharị anya site na nhọpụta.
n'ezie ise ndị a bụ nanị ụfọdụ n'ime ụlọ ndị Rom na Spen. Enwere ọtụtụ ndị ọzọ! Anyị nwere ike ịkpọ La Olmeda, na Palencia, El Ruedo, na Córdoba, veranes, na Asturias, ma ọ bụ Los Villaricos, na Murcia, dịka ọmụmaatụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Ụlọ ndị Rom na Spain